mashandiro ekuyedza terminologies
Kuru Kuita Performance Kuedza Matemu
Performance Kuedza Matemu
Pazasi pane runyorwa rweakajairika mashandiro ekuyedza terminologies:
Kugadzira hwaro ndiyo nzira yekumhanyisa seti yemiyedzo yekutora mashandiro wedhata metric nechinangwa chekutarisa kushanda kwekuzotevera kuita-kugadzirisa shanduko kuchirongwa kana kunyorera.
Benchmarking ndiyo nzira yekufananidza mashandiro ehurongwa hwako maringe nebasera rawakagadzira mukati kana kupokana neyakajairika indasitiri inotsigirwa nerimwe sangano.
Iyo chinzvimbo yehurongwa ihwo huwandu hwebasa raanogona kubata pasina kutyora zvakatemerwa kiyi maitiro ekugamuchirwa maitiro.
TO kugona bvunzo inopedzisa mutoro kuyedza nekumisikidza yako server yekupedzisira kutadza poindi, nepo mutoro kuyedza monitors mhedzisiro pamatanho akasiyana emitoro uye traffic mapatani.
Iwe unoita kuyera kwekugona pamwe chete nekuronga kugona, iyo iwe yaunoshandisa kuronga kukura mune ramangwana, senge rakawedzera mushandisi base kana yakawedzera vhoriyamu yedata. Semuenzaniso, kuti uwane zvinhu zvenguva yemberi, iwe unofanirwa kuziva kuti mangani zviwanikwa zvekuwedzera (senge processor processor, kushandisa ndangariro, dhisiki kugona, kana network bandwidth) zvakakosha kutsigira ramangwana rekushandisa mazinga.
Kugona kugona kunobatsira iwe kuti uone zano rekuyera kuitira kuti uone kana uchifanira kukwirisa kana kuyera.
An kutsungirira bvunzo rudzi rweyedzo yekuita yakanangana nekuona kana kugonesa mashandiro eiyo chigadzirwa pasi peyedzo kana yaiswa pasi pebasa rekutakura uye mavhoriyamu emitoro anotarisirwa panguva yekugadzira mashandiro kwenguva yakareba. Kutsungirira kuyedzwa i subset yemutoro kuyedza.
Kuongorora chiitiko chinoenderana nekutora ruzivo rwakanangana nekumhanya, scalability, uye / kana kugadzikana hunhu hwechigadzirwa chiri pasi pekuyedzwa chinogona kuve nehunhu mukumisikidza kana kugadzirisa mhando yechigadzirwa. Kuongorora kunowanzo shandiswa kuratidza kana kuramba fungidziro maererano nechikonzero cheimwe kana zvimwe zvinoonekwa mashandiro ezvinhu.
Latency chiyero chekupindura chinomiririra nguva inotora kupedzisa kuitiswa kwechikumbiro. Latency inogona zvakare kumiririra iyo huwandu hwakati wandei latency kana subtasks.
Metric zviyero zvakawanikwa nekumhanyisa bvunzo dzekuita sezvakaratidzirwa pachiyero chinonzwisisika. Mamwe metric anowanzo kuwanikwa kuburikidza nemuyedzo wekuita anosanganisira kushandiswa kweprosesa pamusoro penguva uye ndangariro kushandiswa nemutoro.
Kuita zvinoreva ruzivo maererano neyako nguva yekupindura yekushandisa, kubudikidza, uye zviwanikwa zvekushandisa zviwanikwa.
TO kuita bvunzo kuongorora kwehunyanzvi kunoitwa kuona kana kugonesa kumhanya, scalability, uye / kana kugadzikana hunhu hwechigadzirwa chiri kuyedzwa. Kuedzwa kwekuita ndicho superset ine mamwe ese madiki emakesi ekuyedza kuita anotsanangurwa muchitsauko chino.
Performance zvikumbaridzo ndiwo mwero unogamuchirwa pametric yakatarwa yeprojekti yako, inowanzo tsanangurwa maererano nenguva yekupindura, kubudikidza (kutengeserana pasekondi), nematanho ekushandisa zviwanikwa. Matanho ekushandisa zviwanikwa anosanganisira huwandu hweprosesa kugona, ndangariro, diski I / O, uye network I / O iyo yaunoshandisa. Maitiro ekushanda anowanzoenzana nezvinodiwa
Nguva yekupindura chiyero chekupindura iko kunyorera kana chikamu chediki kune chikumbiro chemutengi.
Kuchenesa zvinoreva iyo poindi iyo sosi yasvika mukushandisa kwakazara.
Kukwanisika inoreva kugona kwesicelo kubata mamwe mabasa, pasina kukanganisa mashandiro, nekuwedzera zviwanikwa senge processor, ndangariro, uye kugona kuchengetedza.
Muchirevo chekuyedza kuita, a mamiriro inoteedzana nhanho mukushandisa kwako. Chiitiko chinogona kumiririra kesi yekushandisa kana bhizinesi basa senge kutsvaga chigadzirwa katarogu, kuwedzera chimwe chinhu kungoro yekutengera, kana kuisa odha.
TO utsi bvunzo ndiko kutanga kwekumhanya kwekuyedza kwekuita kuti uone kana yako application ichigona kuita mashandiro ayo pasi peyakajairwa mutoro.
TO spike bvunzo rudzi rweyedzo yekuita yakanangana nekuona kana kugonesa mashandiro eiyo chigadzirwa pasi peyedzo kana yaiswa pasi pebasa rekutakura uye mavhoriyamu emitoro anowedzerazve anowedzera kupfuura anotarisirwa mashandiro ekugadzira kwenguva pfupi. Spike kuyedza ndeye subset yekumanikidza kuyedza.
Muchirevo chekuyedza kuita, kugadzikana inoreva kuvimbika kwese, kusimba, kushanda uye dhata kuvimbika, kuwanikwa, uye / kana kuenderana kwekuteerera kwesisitimu yako pasi pemamiriro akasiyana.
TO kunetseka bvunzo rudzi rweyedzo yekuita yakagadzirirwa kuongorora maitiro echikumbiro kana ichisundirwa kupfuura zvakajairwa kana yepamusoro mamiriro ezvinhu. Chinangwa chekuyedza kushushikana ndechekuburitsa madhiragi ekushandisa ayo anotaridzika pasi pemamiriro epamusoro mutoro. Aya madhigi anokwanisa kusanganisira zvinhu zvakaita sekuenderana nyaya, nhangemutange mamiriro, uye kuyeuka kuyeuka.
Kushungurudzika kuyedzwa kunoita kuti iwe ugone kuona yako yekushomeka isina kusimba mapoinzi, uye inoratidza maitiro mashandisiro anoita pasi peakanyanya mutoro mamiriro.
Kuburitsa ndiyo nhamba yemayuniti ebasa anogona kubatwa pauniti yenguva; semuenzaniso, zvikumbiro pasekondi, mafoni pazuva, zvinorova pasekondi, mishumo pagore, nezvimwe.
Mutoro webasa ndiko kukurudzira kunoiswa kune system, application, kana chinhu chinoteedzera kutevedzera maitiro ekushandisa, zvine chekuita nemari yemubatanidzwa uye / kana data. Basa racho rinosanganisira huwandu hwevashandisi, vashandisi vanoshanda panguva imwe chete, mavhoriyamu e data, uye mavhoriyamu ekutengeserana, pamwe nemusanganiswa wekutengesa. Zvekuenzanisira kwekuenzanisira, iwe unobatanidza mutoro webasa nemamiriro ega ega.
Ndeupi musiyano uripo pakati pe Performance Kuedzwa , Kuedza Mutoro uye Kushungurudzika Kwayedza?
Kuita, mutoro, uye kushushikana bvunzo zvidimbu zvekuyedza kuita, imwe neimwe yakagadzirirwa chinangwa chakasiyana.
Kuedzwa kwekuita. Rudzi urwu rwekuyedza runogadza kana kugonesa kumhanya, scalability, uye / kana kugadzikana hunhu hwesisitimu kana kunyorera pasi pekuyedzwa. Kuita kuri kunetsekana nekuwana nguva dzekupindura, kubudikidza, uye masosi-ekushandisa masisitimu anosangana nezvinangwa zvekuita kweprojekiti kana chigadzirwa. Mune iri gwaro, kuyedzwa kwekuita kunomiririra superset yeese mamwe emakamu ekuyedza ane chekuita nekuita.
Kutakura mutoro. Iyi subcategory yekuyedza kuita yakanangana nekuona kana kugonesa mashandiro ehurongwa kana chishandiso pasi pekuyedzwa kana yaiswa pasi pebasa nemitoro yemitoro inotarisirwa panguva yekugadzira basa.
Kushungurudzika kuyedza. Ichi chikamu chekuyedza kwekuita chakanangana nekuona kana kugonesa mashandiro ehurongwa kana chishandiso pasi pekuyedzwa kana yaiswa pasi pemamiriro anodarika iwo akafungidzirwa panguva dzekugadzira basa. Stress bvunzo dzinogona zvakare kusanganisira bvunzo dzakanangana nekuona kana kugonesa mashandiro maitiro eiyo system kana kunyorera pasi pekuyedzwa kana yakaiswa kune mamwe mamiriro anoshungurudza, senge mashoma memory, kukwana disk space, kana server kutadza. Aya maedzo akagadzirirwa kuona pasi pemamiriro api ekuti chikumbiro chingatadze, kuti chinokundikana sei, uye ndezvipi zviratidzo zvinogona kutariswa kunyevera nezvekuuya kuri kukundikana.
iphone 12 pro dolby chiratidzo
maitiro ekushandisa tsvaga raira mu linux
Iyo 5-inch LG K7 smartphone ichangoburitsa paT-Mobile
Fortnite haisi kuzodzoka ku iPhone munguva pfupi. Epic & apos; s account yekuvandudza ichave iri mu limbo kwemwedzi gumi nemaviri
Android 9.0 smartphone ine hombe yekutsvedza-kunze QWERTY keyboard inogona kuzoitika munguva pfupi
Maitiro ekugadzirisa iyo 'Kusimbisa kunodiwa. Iwe unofanirwa kusaina muGoogle Akaunti yako 'kukanganisa pane Android
T-Mobile yakabhadhara John Legere $ 137 mamirioni mumwedzi yake mitatu yekupedzisira sa CEO
Iyo iPhone XR yekugadzirisa skrini mutengo wagadzwa naApple
Samsung Galaxy S7 uye Galaxy S7 pamipendero zviyero zvinofungidzirwa kuti zvakaziviswa neyakavhurwa schematic
Vamwe vanyoreri veAT & T vari kuwana yemahara smartphone
Akanakisa makomboti emidziyo yesimbi ye LG G5
iPhone 13 Pro Max vs iPhone 12 Pro Max: zvatinoziva kusvika zvino